အဖွဲ့လိုက်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုမည်သို့မှတ်တမ်းတင်မည်နည်း Gadget သတင်း
အခုသူတို့ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအများဆုံးဖုန်းတွေရှိနေတုန်းပဲ။ အလုပ်အတွက်ဖြစ်စေ၊ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုနှင့်ဖြစ်စေအလားတူဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများသည်လူအများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Coronavirus သည်ဤဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုတိုးမြှင့်စေပြီးအလုပ်ခွင်အစည်းအဝေးများ (သို့) သူငယ်ချင်းတစ် ဦး၊ မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး ၏မွေးနေ့အခမ်းအနားများပင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးနိုင်သည်။ ငါတို့မှတ်တမ်းတင်ချင်တယ်.
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောအပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ဖြစ်စေ၊ FaceTime နှင့်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအချို့ကိုမည်သို့မှတ်တမ်းတင်နိုင်ကြောင်းကိုမြင်ရပါမည်။ ဟုတ်ကဲ့သင်မှပြုလုပ်ထားသောဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုသင်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ Skype, Zoom, WhatsApp သို့မဟုတ် Google Meet မှပင်။ အတိုချုပ်ဆိုရသော်ယခုအချိန်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများရှိနေပြီး၎င်းတို့ကိုမည်သို့ပင်ဖြစ်စေဤဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
1 FaceTime ဖြင့် iOS တွင်မှတ်တမ်းတင်ပါလိမ့်မည်
2 Google Meet တွင်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ပါ
3 Zoom တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ
4 Skype ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ပါ
FaceTime ဖြင့် iOS တွင်မှတ်တမ်းတင်ပါလိမ့်မည်
ဟုတ်ကဲ့၊ အက်ပဲလ်ဟာ iOS မှာဖန်သားပြင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ရွေးစရာကိုထပ်မံထည့်သွင်းထားပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကအသံဖမ်းခြင်းကိုခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါလိမ့်မယ် Mac သုံးပါ Lightning cable မှတစ်ဆင့် iPhone သို့မဟုတ် iPad ကိုယ်တိုင်အပြင်၊ ဤ FaceTime မှတ်တမ်းတင်ရန် USB ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Mac နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
QuickTime application ကိုဖွင့်ပါ
File ကိုနှိပ်ပြီး New Recording ကိုနှိပ်ပါ
ဒီရွေးစရာက Mac အတွက်ထပ်ထည့်တယ်၊ WhatsApp မှတိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ ဒီနည်းလမ်းအတိုင်းပဲ iOS device နဲ့သုံးတဲ့အခြား application တစ်ခု။ Mac သည်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအသံအပါအ ၀ င်အရာအားလုံးကိုဖမ်းယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မှတ်တမ်းတင်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗီဒီယိုကိုသိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်သည်။
Google Meet တွင်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ပါ
ဂူဂဲလ်တွေ့ဆုံဝန်ဆောင်မှုသည်ဤဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ၏အသံသွင်းခြင်းကိုခွင့်ပြုသော်လည်း၎င်းသည်အခမဲ့မဟုတ်ပါ။ ဒီ function ကိုန်ဆောင်မှုများနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လိမ့်မယ် , G Suite ကိုလုပ်ငန်း y ပညာရေးအတွက်, G Suite လုပ်ငန်း ဒါကြောင့်များစွာသောသင်တို့တွင်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာရှိသည်သာဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။
သို့သော်လခပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုရှိသူများအနေဖြင့်၊ ဤအဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကိုတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် PC (သို့) Mac ကိုဖွင့်သောအခါ session စတင်ပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက် video call သို့ ဝင်၍ အဆင့်များကိုလိုက်နာပါလိမ့်မည်။
ဒေါင်လိုက်အချက်သုံးချက်ဖြစ်သော More menu ကိုကျွန်ုပ်တို့နှိပ်ပါလိမ့်မည်
အဆုံးမှာ Stop မှတ်တမ်းကိုနှိပ်ပါ
ပြီးတာနဲ့ဖိုင်ကိုသိမ်းဆည်းလိမ့်မည် Meet ဖိုင်တွဲအတွင်းမှ Google Drive တွင်။ ဤကိစ္စတွင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အစတွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့၊ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင်၏ရွေးချယ်မှုမီနူးတွင်ပေါ်မလာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုယ်တိုင်ကအသံသွင်းထားသောကန့်သတ်ချက်များကြောင့်သို့မဟုတ် G Suite Enterprise မှသီးသန့်ဖြစ်သောဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုက်ရိုက်မရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ နှင့်ပညာရေးအတွက် G Suite လုပ်ငန်း။
Zoom သည်ဤ Covid-19 အကျပ်အတည်းတွင်အသုံးများဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သံသယမရှိဘဲ၊ သူတို့သည်အစပိုင်း၌ရှိခဲ့သောလုံခြုံရေးပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပြီးဖြစ်ကာသုံးစွဲသူများသည် Zoom ဆက်လက်၍ ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင် Zoom ရှိဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအသံဖမ်းခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်သိမ်းဆည်းထားသည်။ အခမဲ့ cloud ၀ န်ဆောင်မှုလည်းမရှိ၊ ဒေသခံမှတ်တမ်းတင် အခမဲ့အကောင့်များအားလုံးတွင်သင်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုတိမ်တိုက်ထဲ၌သိမ်းဆည်းထားလိုလျှင်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
Zoom ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် tool ၏ configuration options ကိုကြည့်ပြီးရိုးရှင်းသောအဆင့်အနည်းငယ်ကိုလိုက်နာရမည်။ ဤကိစ္စတွင်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာက function ကိုသက်ဝင်စေပြီး၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနှိပ်ပါ အကောင့်ဆက်တင်များ ရွေးချယ်စရာအကြောင်း အသံသွင်းခြင်း နောက်မှထို option ကိုနှိပ်ပါ ဒေသခံမှတ်တမ်းတင်.
Burn option ကိုနှိပ်ပါ
ကျနော်တို့ဒေသခံမှတ်တမ်းတင် option ကိုရွေးချယ်ပါ
သိမ်းဆည်းထားသည့်စာရွက်စာတမ်းကို၎င်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည် ဖိုင်တွဲချဲ့ပါ သင်၏ PC သို့မဟုတ် Mac အတွင်းရှိဤဖိုင်သည် Documents ဖိုင်တွဲတွင်တည်ရှိပြီးမှတ်တမ်းအားလုံးကို Mp4 or M4A format ဖြင့်မည်သည့် player မှမဆိုကြည့်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ ၀ န်ဆောင်မှုများခံစားခဲ့ရသောစန်းမတိုင်မီကဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုအသုံးပြုပြီးသူများအတွက်အကျော်ကြားဆုံးသောကိရိယာတစ်ခုမှာ Skype ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်စမတ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းသည်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်ရန်လည်းခွင့်ပြုသည်။မှတ်တမ်းတင်ပါ»ထိပ်ပိုင်းရှိချိန်ညှိချက်များတွင်တွေ့ရသည်။
၎င်းသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးအသံများကိုဤချက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ချက်တင်သမိုင်းတွင်တိုက်ရိုက်သိမ်းဆည်းထားသည် မှတ်တမ်းတင်ဖျက်ထားသည် အလိုအလျောက်။ PC နဲ့ Mac တို့အတူတူပါပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ settings ကိုနှိပ်ပြီး start recording ကိုနှိပ်ပါ။
ဖြစ်ရပ်အားလုံးနီးပါးတွင်သင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ထိုအပလီကေးရှင်းများကိုယ်တိုင်တွင်ထိုရွေးချယ်စရာရှိသည်။ ၎င်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများကိုရှာဖွေခြင်းသည်ရိုးရိုးလေးဖြစ်ပြီးရှုပ်ထွေးမှုမပါဝင်ပါ iOS ၏အမှု၌မှလွဲ။ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် Mac လိုအပ်သော FaceTime နှင့်အတူ။
Application အများစုသည်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုမှတ်တမ်းတင်နေကြောင်းအမြဲတမ်းပြသရန်အရေးကြီးသည်၊ သို့သော် FaceTime နှင့်အတူ iOS ကိစ္စတွင်၎င်းကိုမတွေ့ရပါ။ လူများ၏သီးသန့်တည်ရှိမှုအရ၊ ဤမှတ်တမ်းများကိုပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်မျှဝေရန်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်လည်းတင်းကြပ်သောဥပဒေများရှိသည်ဟုပြောရန်မသင့်ပါ ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတွင်ပါ ၀ င်သူအားလုံး၏ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရပဲဤအချက်အလက်ကိုအမူအကျင့်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်မျှဝေသင့်သည် privacy ကိစ္စများအတွက်ဥပဒေရေးရာပြproblemsနာများ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » အဖွဲ့လိုက်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကိုမည်သို့မှတ်တမ်းတင်မည်နည်း
ယခုသင်အခမဲ့ GTA5ကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်